1. ဆရာရှင့် သမီးအသက်ကအခု ၂၄ ပါ။ သမီးသွားက မကြာခဏသွေးထွက်ပါတယ်။ မှတ်မှတ်ရရ သမီးဆယ်တန်း အောင်ပြီးကတည်း သွားတွေက သွေးထွက်ပါတယ်။ ဆေးခန်းပြဖို့လိုပါသလားရှင့်။ ဘာဆေးတွေ သောက်ရမှာလဲရှင်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ။
2. သမီးအသက်က ၂၅ နှစ်ထဲမှာပါ။ အလုပ်လုပ်နေပါတယ်။ အိမ်ထောင်ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ယောက်ကျားနဲ့ ခွဲနေရတာပါ။ ကလေးမရှိသေးပါဘူး။ အခုတလောသွားဖုံးထဲက အနာမရှိပဲ သွေးကျကျနေတာ တစ်ပတ်ကျော်လောက် ရှိပြီဆရာ။ နေ့တိုင်း သွေးထွက်နေပါတယ်။ နေ့ခင်းဘက်လောက်ဆို သွေးကျကျလာတတ်ပါတယ်။ နှာခေါင်းထဲမှာလဲ တခါတလေ သွေးဖတ်လေးတွေ ရှိနေတယ်။
3. ကျွန်တော် မနက်အိပ်ယာထပြီး မျက်နှာသစ်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာ ပလုပ်အရင်ကျင်းပါတယ် (သွားမတိုက်ခင်)။ ပလုပ်ကျင်းလိုက်တာနဲ့ သွေးနည်းနည်းပါလာတယ်။ နောက် သွားတိုက်တော့လည်း သွေးထွက်လာတယ်။ တော်တော်များတယ်။ တခါတလေ သွေးခဲအဖတ်လေးတွေပါ ပါတယ်။ သွားတိုက်ဆေးကို colgate သုံးပြီး သွားတိုက်တန်ကို berman သုံးပါတယ်။ မနက်တခါ ညတခါ တိုက်ပါတယ်။ သွေးထွက်တာကို ပျောက်အောင် ဘာလုပ်သင့်ပါသလဲ။
သွားဖုံးကနေ သွေးယိုလာတာဟာ သာမန်ကာရှန်ကာ ဖြစ်နိုင်သလို၊ သွားဖုံးရောဂါရှိနေတာလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ခဏခဏ သွေးယိုရင် (လူကီးမီးယား) သွေးကင်ဆာ၊ platelet disorders သွေးယိုရောဂါတွေကို သံသယရှိဘို့ လိုတယ်။
- (အက်စ်ပရင်) ဆေးကို တကယ်မလိုဘဲ မသောက်ပါနဲ့။